Cudurka Aidska iyo BBC-du maxay wadaagaan?
waxay wadaagaan waxay jecelyihiin inay ku faafto faaxishaddu ama sinadu umadda muslimka si ay ugu helaan sharikaadkooda soo saara dawooyinka kahortagga HIV inay helaan suuq ay ku gadaan reer galbeedku.
Waxaa aad uga hadlay abu Mohamed maqaalkiisa (widhwidh online)ee kusaabsanaa dhibaatadda HIV iyo dhibaatadda aduunka qarbiga ah uu ku hayo cudurkan dilaaga ah.. waxaana markhaanti madoonto ah in dunidda Muslimka uu aad ugu yar yahay cudurkani sababta yaraysana waxaa weeye Manhajka ay rumaysan yihiin ee Alle iyo Rasuulkiisu (scw)uga digeen dhibaatadda galmadda aan sharciga ahayn boqol iyo afar iyo labaatan sano kahor ayaa allaah subxaanuhu Watacaalaa ugu digay umadda Muslimka ah inay kafogaadaan sinadda ama galmadda aan sharciga ahayn marka Rabi kacabiray ereyga ah ha udhowaanina Sinadda waxaa Rabi inoogu sheegay inay jiraan Wasiilooyin kahoreeya Sinadda intaan lasamayn oo ay ugu horayso ishu inay Sino latimaado hadaan laga laabin Cawradda haweenka, waxaa ku xigga in gabadhii ajnebiga kaa ahayd loo dhoola cadeeyo, waxaa kamidda Wasaaisha Sinadda hadal aan sharci ahayn oo Dumarka lagu akhriyo, waxaa kamida Wasaaisha sinadda in meel cidla ah lagula keliyaysto haweenay ajnebi kaa ah.
Waxaasoo dhami waa daariiqyadda Rabi ku ilaashay Sinaada inay dhacdo.Haddaba waxaa wax lala yaaabo ama murugo weyn igu reebtay ah waxyaalaha ay faafinayaa adeecada uyeerisa umadda Somaaliyeed xumaanta ee ay leedahay Dawladda ingriisku oo beryahan dame caaddo kadhigatay inay umadda Somaaliyeed ka jeediso dhaqankeedii suubanaa ee ku dhisnaa xishoodka iyo akhlaaq wanaaga uguna baaqaysa dadka wax magaradka ah inay adeegsadaaan Sinadda (Bishardi_ inay isticmaalaan Aalaada loo yaqaan Kondhobka ama Cinjirka hadaba waa yaabe miyaanay ogayn cidkastoo kaqayb qaadatay Barnaamijkaa kabaxa adeecadda BBC-du inuu yahay Gaalnimo cad oo loo badheedhay. Waayo waxaa wax xaaraantimeeya Alle oo qudha waxna xalaaleeya. Hadaba waayaabe ma anshaxbaa qofka adeecadaa Public ah ee shanta Qaaradood ee aduunka laga dhegaysanayo kaxayaysiinaya ku dhaca sinadda.una xalaaleeyay waxmagaradka in laisticmaalo Kondhobka ama Cinjirka? uuna ka badbaadinayo HIV.Waxaa marag madoonto ah in qof kasta oo ankiraa Dhegaha ka furaysta wax Alle iyo Rasuulkiisu (SCW) xaraameeyeen inuu ku dhacayo gaalnimo diintana banaanka kajoogo . Waayo waa wax macluum ku ah Diinta islaamka in Sinaddu ama Galmmada aan sharcigga ahayn Xaaraam tahay.
Waxaana dhab ah in dadka ficilkaa xun u badheedhaya inaan loogu cudurdaarayn Jahli ay ku dhaceen. Waayo hadii laweydiiyo inanka laba jirka ah Galmadda aan sharcigga ahayn waxaa xaqiiqa inuu ku jawaabayo waa wax xun. Haddaba waxaan leeyahay kuwa Waxaas dadka ku faafinaya ee Raadinaya aduunka yaraw dib ucusboonaysiiya Towbadiina. Hadaad gaallo tihiina ubadheedha umadda Muslimka ah oo waxba haku sirina luqadaad ku hadlaysaan Waxaan hadalkaa ujeedinayaa waa kuwa masrixiyadda ku matalaya kondhob qaado hadaad galmo rabto!!!!!!!!!!!!!!! ceeb iyo caarba idinkaa leh.ee ilaahay kabaqa .BBC-dana waxaan leeyahay afkiina oo qudha ku hadla ama ilaahbaa idin risaaqee wershadaha UK xalaal kaxamaasha oo katanaasula inaad waxkastoo sun ah oo laydiin yeedhiyo aad ku faafisaan umadda somaaliyeed ee dhibaatadeedii horeba la ildaran........ .
Wabilaahi Tawfiiq .
Wasalaamu Calaykum Waraxmatulaah
Faafin: SomaliTalk.com Dec 21, 2003